Iincwadi ezilungileyo zokuhamba | Uncwadi lwangoku
Sivula incwadi kuba kufuneka sizithuthe siye kwezinye iindawo kunye neemeko, ukuphepha inyani ngokusebenzisa abalinganiswa esibamkelayo njengabahlobo kunye namabali esinokuziva sichongiwe ngawo. Nangona kunjalo, zikhona nezinye iincwadi ezinenjongo yokusivumela ukuba sityelele elinye ilizwe emhlabeni ngaphandle kokuthenga itikiti lokuya kuphela. Ezi ezona ncwadi zokuhamba baba ziikhaphethi zemilingo ezigqibeleleyo apho banokujonga kwiimfihlakalo zaseAsia, iindlela zaseMelika okanye ezomdabu zaseSpain.
1 Iincwadi ezilungileyo zokuhamba
1.1 Endleleni, nguJack Kerouac
1.2 I-Indiya: Emva kwesigidi sezigidi, ngu-VS Naipaul
1.3 Ngasendle, nguJon Krakauer
1.4 Yidla, uthandaze, kwaye uthande uElizabeth Gilbert
1.5 Amakhulu amabini eMiles ukusuka eManhattan, nguGuillermo Fesser
1.6 Iqela, nguErnest Hemingway
1.7 ITao yoMhambi, nguPaul Theroux
1.8 Yasendle, nguCheryl oHanjisiweyo
1.9 NguLwandle lwaseCortez, nguJohn Steinbeck
Kubhalwe kwiiveki nje ezintathu kumqolo wephepha ngaphandle kwemida okanye izithuba, Endleleni, eyapapashwa ngo-1957, ngokukhawuleza yaba yiyo incwadi yokubetha yesizukulwane. Abantu abancinci abavela kwi-50s bavulekele kwiingcinga ezintsha kunye neendlela zokuphila abafumene kweli bali lobomi sisizathu esifanelekileyo sokuhamba neKerouac phesheya kweUnited States naseMexico, amazwe awathi omnye wababhali abanempembelelo kwinkulungwane yama-1947 wahamba phakathi kowe-1950 nowe-XNUMX.
I-Indiya: Emva kwesigidi sezigidi, ngu-VS Naipaul
Ngabazali abangamaHindu kodwa bazalelwe kwisixeko sasePort eSpain, eTrinidad naseTobago, uNaipaul wenza uhambo oluya kwilizwe looyisemkhulu ukuyokukrola kuwo onke amaphepha ale ncwadi, umzobo welo lizwe laphithizelayo nelinomoya waseIndiya, elinemibala engwevu. , apho imiba efana indima yabasetyhini, imboni ye-Bollywood okanye umlo phakathi kwamaHindu namaSilamsi basondela ngu Ibhaso likaNobel kuNcwadi ngentsimbi kunye nokuthantamisa kwabo bavula amehlo kwilizwe lomama eligcwele izinto ezininzi. Uyolo kubathandi belizwe lekheri, iyoga kunye neTaj Mahal.
Ngaba ungathanda ukufunda VS Naipaul India?
Ngasendle, nguJon Krakauer
Ukulungiswa kwi-cinema ngo-2007, Ukuya kwiindlela zasendle yiyo Ubomi bukaChris McCandless obubhalwe nguJon Krakauer, oneminyaka engama-24 ubudala nowathi ngo-1992 wagqiba kwelokuba ayishiye imoto yakhe aze aqhube aye kwilizwe elinobutshaba eAlaska efuna ukwamkela indlela yokuphila enempambano. Umzimba walo mfana wafunyanwa engenabomi kwiinyanga kamva, evusa uluvo phakathi kwabo babemncoma amandla kaMcCandless okushiya inkqubo kwaye aqhubeke nendlela yakhe yokuphila, kwaye abo babona eluvalelweni isenzo esipheleleyo sokungazi malunga nemithetho yendalo .
Yidla, uthandaze, kwaye uthande uElizabeth Gilbert
Emva koqhawulo-mtshato kunye nentliziyo ebuhlungu, intatheli u-Elizabeth Gilbert wazifumana ekwindlela engenabo ubumoya kunye nenjongo. Ubunzima obukhoyo athe wagqiba ekubeni asombulule kunye nabo uhambo oluya e-italy, apho watya khona konke anako, Indiya , ilizwe awayezifake kuzo iingcinga zakhe zokomoya, okanye Bali, apho wazama ukwamkela isixa sayo yonke imbonakalo yakhe. Ukugxekwa ngabo bajonga le ncwadi "yincwadi yobomi enesithukuthezi, eyabafazi abathandekayo," kodwa bayathandwa ngabo babona umsebenzi kaGilbert njengokhuthazo, Yitya, Thandaza, nothando yaguqulwa ukuba ibe ngumdlalo bhanyabhanya ngo-2010 noJulia Roberts.
Relámete kunye Yitya, thandaza kwaye uthande.
Amakhulu amabini eMiles ukusuka eManhattan, nguGuillermo Fesser
Intatheli yeflegi naphi na apho ikhoyo, uFesser ebesibalisela amabali kangangeminyaka engama-25 ngeGomaespuma kodwa nangeencwadi ezinomdla njengaleIikhilomitha ezilikhulu ukusuka eManhattan. Yenziwe ngabalinganiswa abohlukeneyo kunye namabali akhe, umbhali usazisa ngeendlela ezahlukileyo, ukusuka kwizithethe zamakhoboka ukuya ekudlulisweni kwamaxesha onyaka, kwilizwe eligcwele uthando kunye nobuhle obugqitha ii-clichés ebezisoloko zinobunzima kwihlabathi liphela. lelinye lawona mazwe anamandla emhlabeni.
Iqela, nguErnest Hemingway
Emva phayaa ngo-1926, iSpain yayililizwe elilityelweyo lihlabathi, kude lee kubuqaqawuli beenkulungwane zangaphambili. Umbhali wokuhamba ngokungenantlonelo, uHemingway uxelwe Fiesta uhambo lweqela lamaMelika namaNgesi ukusuka eParis ukuya ePamplona, ​​apho abadumileyo Iiholide zeSan Fermin baba ngowona mfanekiso ubalulekileyo waseSpain kwisizukulwana esiphawulwe ngamanxeba eMfazwe yeHlabathi yokuQala. Ngapha koko, uPamplona uyi-ode ngokwayo kumbhali woMntu oMdala kunye noLwandle kunye neIkhephu laseKilimanjaro.
ITao yoMhambi, nguPaul Theroux
Kuthathwa njengenye ye Ababhali abahamba phambili bexesha lethu, UTheroux waduma ngo-1976 ngokupapashwa kwe-Great Railway Bazaar, umsebenzi owawulandelwa ngamanye amagama I-tao yomhambi. Ngokubhekisele kwifilosofi yaseTshayina eyaziwayo, uTheroux uthathe ithuba lokuhamba kwakhe iminyaka engamashumi amahlanu ukusinika oku Ibhayibhile yomhambi apho umbhali exuba ababhali abamkhuthazayo ukuba enze i-adventure yakhe (ukusuka kuMark Twain ukuya ku-Ernest Hemingway), kunye nembonakalo eyahlukileyo nenamandla eya kuthi ikhuphe loo moya uhambayo uwuphetheyo. Konke kuyonwabisa.
Yasendle, nguCheryl oHanjisiweyo
Ephawulwe luqhawulo-mtshato, ukusweleka kukamama wakhe kunye neziyobisi, ngo-1995 i-American Cheryl Strayed yagqiba ekubeni iqale i-solo adventure hamba ngaphezulu kwamawaka amane eekhilomitha kwiMassif Pacific Trail ehamba kuyo yonke iCalifornia. Ephethe ubhaka kunye neekhilogram zeoyile, uSrayed waphela ekuzifumaneni phakathi kwindalo apho iziporho zexesha elidlulileyo zazilinde khona kwiindlela zonke. Ukukhuthazwa okuchanekileyo kwabafundi beeyure eziphantsi.
Ndalo yenye yezo ncwadi zikhuthazayo.
NguLwandle lwaseCortez, nguJohn Steinbeck
Ngo-Matshi 1940, xa iYurophu yayilungiselela iMfazwe yesibini yeHlabathi, uSteinbeck wagqiba kwelokuba athathe uhambo ekwakukudala elulangazelela. Kunye nomhlobo wakhe, isazi sebhayoloji uEd Doc Ricketts, umbhali wePearl waqala Uhambo lwe-4 lamawaka eekhilomitha ukusuka eMonterrey kunye nomda weBaja California de ungene kulwandle olungaziwayo lwaseCortez. Uhambo lwenzeka kwisikhephe sardine esibizwa ngokuba yiWest Flyer apho umbhali athatha amanqaku ukuba uyakuba yenye yezo ezona ncwadi zokuhamba zinomdla kwinkulungwane yama-XNUMX.
Ngaba ungathanda ukufunda Ngolwandle lwaseCortez?
Zithini, ngokoluvo lwakho, ezona ncwadi zibalaseleyo zokuhamba?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Iincwadi ezilungileyo zokuhamba
Iingcinga ezingama-36 kubabhali, ukubhala, kunye noncwadi